Olona 6 no matin'ny fianjerana fiaramanidina tamin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Olona 6 no matin'ny fianjerana fiaramanidina tamin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo
Desambra 21, 2018
Fiaramanidina vita Rosiana misy olona 23 no nianjera tao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo.
Ny fiaramanidina Gomair An-26, izay efa nalahatry ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo, dia nianjera tamin'ny fanatonana ny seranam-piaramanidina Kinshasa, hoy ny tatitra nataon'ny International Flight Network (IFN), ny zoma teo. Niainga avy tao Tshikapa, atsimo andrefan'ny DRC ny fiaramanidina, sahabo ho 700km (435 kilaometatra) miala an'i Kinshasa, ny Desambra 20. Tsy tonga tany amin'ny toerana nalehany io rehefa nodiovina hidina 5000 metatra sahabo ho 35km (22 kilaometatra) avy eo. avy amin'ny seranam-piara-manidina, raha ny tatitra hatrany. Fotoana fohy taorian'izay dia nanjavona avy tao amin'ny efijery radar ny fiaramanidina.
Voalaza fa azon'ny ekipa rosiana atao ny mitondra azy.
Ny masoivoho rosiana ao amin'ny DRongo Aleksey Sentebov dia nilaza tamin'ny zoma fa, raha ny angom-baovao tsy voamarina, dia olona 23 no tao anaty fiaramanidina, anisan'izany ny ekipa ekipa telo, olom-pirenena rosiana. ”
Olona enina no namoy ny ainy tamin'ny fianjeran'ny fiaramanidina tao anatin'ny 25 kilaometatra miala ny seranam-piaramanidina Kinshasa N'jjili, hoy ny tatitra nataon'ny AFP, raha ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana. Tsy fantatra ny niafaran'ireo ekipa mpiasa telo tao amin'ilay fiaramanidina.
"Mitohy ny asa fikarohana sy famonjena, ny toerana fianjerana sy ny anarana ary ny hiafaran'ireo mpanamory fiaramanidina dia voafaritra," hoy ny diplaomaty rosiana.
Saint Lucia miroso amin'ny fampandrosoana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena
Airbus A319neo dia mandresy ny karazana Certification iraisan'ny FAA sy EASA
Mpiara-miasa amin'ny ITIC miaraka amin'ny ATM, hampiantrano ny Vovonana fihaonamben'ny fizahan-tany fizahan-tany voalohany
8 ora lasa izay
Vaovao momba ny dia any Norvezy
Raha tsy afaka mandeha any Norvezy ianao dia mitondra anao any Norvezy ny PBS
Airbus Corporate Jets dia nahazo fandresena ho an'ny ACJ319neo
Ny LATAM dia efa ho avo roa heny ny sandan'ny entana amin'ny 2023
Ny Buriram any Thailandy dia manao heloka bevava amin'ny fandavana ny fanaovana vaksinin'ny COVID-19
Ny seranam-piaramanidina Frankfurt hanokatra indray ny Northway Runway manomboka ny 1 Jona
Ny NH Hotels dia manambara ny hisian'ny debut any Moyen Orient ho avy
Serivisy fampandrenesana tariby
Keto GT Shark Tank Review: SCAM? Na tsia!
Alaska Air Group dia manafatra fiaramanidina vaovao Embraer E9 vaovao hiasa amin'ny Horizon Air